၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အမေရိကန်၏ရေစီးကြောင်းအစီရင်ခံစာ - စမတ်အိမ်သာများ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့်စိတ်ကြိုက်ရေချိုးခန်းသုံးဗီဒိုများမှာလူကြိုက်များမည်!
ပင်မစာမျက်နှာ / ဘ‌‌လော့ခ် / ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အမေရိကန်၏ရေစီးကြောင်းအစီရင်ခံစာ - စမတ်အိမ်သာများ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့်စိတ်ကြိုက်ရေချိုးခန်းသုံးဗီဒိုများမှာလူကြိုက်များမည်!
2020 / 11 / 02 အမြိုးခှဲခွားခွငျးဘ‌‌လော့ခ် 15013 0
အမေရိကန်အိမ်တွင်း ၀ န်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော HOUZZ သည်နှစ်စဉ်အမေရိကန်ရေချိုးခန်းရေစီးကြောင်းလေ့လာမှုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ အစီရင်ခံစာ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီနှစ်မှာတော့ HOUZZ ကအမေရိကန်အိမ်ပိုင်ရှင် ၁,၉၄၄ ယောက်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကသူတို့ရွေးချယ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်သူတို့ပြုလုပ်သည့်အခါသူတို့ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏ရေချိုးခန်းများကိုအသစ်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ ရလဒ်များကိုအောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုံးနိူင်သည်။ အနားယူခြင်းနှင့်အပန်းဖြေခြင်း၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ အလင်းရောင်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ Accent နံရံ၊ Modern Mix နှင့်အခြားအရာများ။
- ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများ -
တိုးပွားလာသောအမေရိကန်အိမ်ပိုင်ရှင်များသည်ရေချိုးခန်းကိုရေချိုးခန်းကိုအပန်းဖြေရန်နေရာအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီးအိမ်ထောင်စု ၁,၅၉၄ ၏ ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်ရေချိုးခန်းတွင်အနားယူပြီးအနားယူသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဖြေလျော့သူ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းကရေချိုးကန်ထဲ ၀ င်တာကသူတို့ကိုသက်သာစေတယ်လို့ဖြေပါတယ်။
ရေချိုးကန်များ၏အပန်းဖြေခြင်းလုပ်ငန်းကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းယခုနှစ်တွင်သူတို့၏ရေချိုးခန်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သောဖြေဆိုသူ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်သူတို့၏ရေချိုးကန်များကိုမသုံးကြသေးဘဲ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းကမူ၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်ဟုပင်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၄ င်းတို့၏ရေချိုးကန်များကိုဖယ်ရှားလိုသူများ၏ ၅ ပုံ ၁ ပုံမှာ ၄ င်းတို့၏ရေချိုးခန်းခေါင်းအပုံအရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်ရေချိုးခန်းအကူးအပြောင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏ရေချိုးခန်းအလွှာကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏ရေချိုးခန်းအရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ (၂၀ ရာခိုင်နှုန်း) ။
၄ င်းတို့အထဲမှ ၃၆% သည်ရေချိုးခန်းအခန်းပုံးများအစား ၂၁% ကထုံးစံအရထုံးစံအတိုင်းထုထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရေချိုးခန်းဗီဒိုများကိုရွေးချယ်သည်။ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းကအမေရိကန်စျေးကွက်ကိုထိုးဖောက်သည်။ သိုလှောင်ရန်နေရာ ရေချိုးခန်းဗီရိုပုံစံအရဖြေဆိုသူ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် built-in ရေချိုးခန်းဗီရိုများကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထို့နောက်နောက်ဆက်တွဲ freestanding (၂၈%) နှင့်နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသည် (၁၅%) နှင့်ဖြေဆိုသူ ဦး ရေသည်နံပါတ်တပ်ထားသောထုတ်ကုန် ၄ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ယခုနှစ်တွင်အမေရိကန်အိမ်ပိုင်ရှင်များ၏ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် nozzle ပါသောအိမ်သာသို့ပြောင်းရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် ၅ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းကစမတ်အိမ်သာများတပ်ဆင်ထားသည့်ကိုယ်ပိုင်သန့်ရှင်းရေးအင်္ဂါရပ်များနှင့်အပူထိုင်ခုံများပါသောအိမ်သာများကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ထပ်မံဖြည့်တင်းခြင်း၊ ဆန့်ကျင်မှုန့်များပါ ၀ င်သည့်ညအလင်းရောင်၊ အလိုအလျောက်အဖုံးလှန်ခြင်း၊
ရေချိုင့်ဝှမ်း၏အင်္ဂါရပ်များ၏လူကြိုက်များမှုမှာပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအမေရိကန်အိမ်ပိုင်ရှင်အများစုသည်သူတို့၏အင်တုံကို (၆၅%) ဖြင့်အစားထိုးရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မပြောင်းလဲသေးပါ။ နောက်ဆက်တွဲ (၁၇%) နှင့်ကောင်တီ (၉%) အင်တုံများနှင့်အတူ ။ ထို့အပြင် ၆၈% သည်အင်တုံနှစ်ဆအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရာခိုင်နှုန်းအတူတူဖြစ်သည်။
ater ရေချွေတာခြင်း၊ အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းများသည်အလွန်စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်
ဖြေဆိုသူ ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့၏ဆေးရည်များကိုအစားထိုးကြသည်။ သူတို့ရဲ့ faucets အစားထိုးသူတို့တွင်, အိမ်ပိုင်ရှင်၏ 48 ရာခိုင်နှုန်းကအနည်းဆုံး faucet အသစ်တစ်ခုကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့အနက်ဖြေဆိုသူများ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသောရေပိုက်အသစ်များသည်ရေချွေတာခြင်း၊ မနှစ်ကထက် ၄ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းခြင်း၊ faucets အသစ်ပိုင်ရှင်၏ ၁၆% သည်လက်ချောင်းများမကပ်ပါ။ faucets အသစ်များ၏ ၅% သည်ထိတွေ့မှုကင်းမဲ့နိုင်ပြီး၊ ဒီနှစ်ကမနှစ်ကထက် ၂ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခဲ့သည်၊ ဒါ့အပြင် sensor faucets ဟာလူကြိုက်များလာတယ်။
LLED Lights, ရေချိုးသောကြေးမုံထဲသို့ခတ်ထားခြင်း အင်္ဂါရပ်များ
ကြေးမုံအတွက်မူ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် LED အလင်းရောင်ရှိသည့်ထုတ်ကုန်များကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ထက် ၆ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းကဤအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူထုတ်ကုန်များကိုရွေးချယ်သည်။
- ရေချိုးခန်းနေရာ -
ရေချိုးခန်းနံရံများနှင့်ကြမ်းပြင်များပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတွင်လူအများစုသည်ကြွေထည်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ၇၀% သည်နံရံများအတွက်ကြွေပြားကိုရွေးချယ်ကြပြီးတစ်နှစ်လျှင် ၄ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခဲ့သည်။ လူ ဦး ရေ၏ ၁၀% ကျော်သည်နံရံများနှင့်ကြမ်းပြင်နှစ်ခုလုံးတွင်စကျင်ကျောက်ကိုရွေးချယ်ကြသော်လည်းကြမ်းခင်းအတွက်စကျင်ကျောက်ရွေးချယ်မှုသည်ရာခိုင်နှုန်း ၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားပြီးလူ ဦး ရေတိုးပွားလာခြင်းကိုထင်ဟပ်သောကြောင့်ရေချိုးခန်းလုံခြုံမှုပြissuesနာကိုစဉ်းစားကြသည်။
ရေချိုးခန်း၏ရေချိုးခန်းမဟုတ်သောနေရာများတွင်လူအများအပြားသည်ရေချိုးခန်းareaရိယာထက်ကြွေပြားများကိုအလှဆင်ပစ္စည်းများဖြင့်အစားထိုးရန်ရွေးချယ်ကြပြီးဖြေဆိုသူ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဤထုတ်ကုန်များကိုရွေးချယ်ကြသည်၊ ကြွေပြားကိုရွေးချယ်သူ ၂၆% ထက်များစွာပိုများသည်။ သို့သော်ကြမ်းပြင်၏ရေမသောက်သည့်ဒေသများတွင်လူအများစု (၅၉%) သည်ကြွေထည်ပစ္စည်းများအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ကြသည်။
ဒီနှစ်မှာတော့ဖြေဆိုသူ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ရေချိုးခန်းအတွက်ခေတ်ပြိုင်စတိုင်ကိုရွေးချယ်ကြလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထက် ၅ ရာခိုင်နှုန်းပိုများသည်။ ခေတ်သစ်စတိုင်သည်အမေရိကန်ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းတွင်အဓိကပုံစံဖြစ်နေသည်ကိုပြသည်။ ဤအချက်သည်အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၁၈ ရာနှုန်းသည်ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာေရွးချယ်မှုကိုေကာက်။ 20 မှ ၃ ရာခိုင်နှုန်းေ A ာက်တွင်ကျသည်။ ခေတ်ပြိုင်၊
အရောင်အရမူအဖြူသည်အဓိကအရောင်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးလူအများအပြားသည်ရေချိုးခန်းဗီရိုများ၊ ကောင်တာများ၊ ရေချိုးခန်းနံရံများနှင့်အထွေထွေနံရံများ၏အဓိကအရောင်အဖြစ်အဖြူကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ကောင်တာများ၌ဖြေဆိုသူ ၅၁% ကျော်သည်အဖြူ၊ အရောင် (၁၅%)၊ မီးခိုးရောင် (51%) နှင့်အပြာ (15%) များရှေ့တွင်အဖြူရောင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးအရောင်ရွေးချယ်သောဖြေဆိုသူအရေအတွက်သည်လေးရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။
8 ဖြေဆိုသူ ၁၀ ဦး အနက် ၈ ဦး သည်သူတို့၏ရေချိုးခန်းအလင်းကိုပြောင်းလဲရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
ယခုနှစ်တွင်ဖြေဆိုသူ ၁၀ ခုအနက် ၈ ခုသည်သူတို့၏ရေချိုးခန်းအလင်းရောင်ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက်အများဆုံးသောနံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်မီးခွက်များ (၅၈%) နှင့်ပြန်လည်ပါ ၀ င်သောအလင်းရောင် (၅၅%)၊ နောက်နောက်တွင်ရေချိုးခန်းမီး (၃၂%)၊ ပန်ကာမီး (၂၅%)၊ မှန်မီး (၁၇%) တို့ပါဝင်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမှန်မီးများအနက် ၄ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာသည်။ ရေချိုးခန်းဗီရိုများနှင့်ရေချိုးခန်းမှန်ထုတ်လုပ်သူများ၏အာရုံကိုခံထိုက်သည်။
- အခြားအချက်များ -
၁။ အမေရိကန်အိမ်ပိုင်ရှင်များအတွက်ရေချိုးခန်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၏ပျမ်းမျှကုန်ကျငွေမှာကန်ဒေါ်လာ ၈၀၀၀ ဖြစ်ပြီး၊ ၅၃၀၀၀ ယွမ်ရှိသည်။
၂။ ရေချိုးခန်းပြန်လည်မွမ်းမံမီဖြေဆိုသူ ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းက ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၅၉% ရှိရာရေချိုးခန်းဟောင်းကိုမကျေနပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
(၃) အမေရိကန်အိမ်ပိုင်ရှင်များသည်သူတို့၏ရေချိုးခန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြီးမားဆုံးတိုင်ကြားချက်များမှာသိုလှောင်ရန်နေရာမလုံလောက်ခြင်း (၃၄%)၊ ရေချိုးခန်းနေရာအနည်းငယ်သာ (၃၄%)၊ မလုံလောက်သောအလင်းရောင် (၂၉%) နှင့်တန်ပြန်တန်ဘိုး (၂၅%) တို့ဖြစ်သည်။
ဖြေဆိုသူ ၄၊ ၅၉ ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဟာရေချိုးခန်းထဲမှာမအိပ်ဘဲနေခဲ့ကြပြီး၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် ၄ ရာခိုင်နှုန်းပိုများကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
၅၊ ဖြေဆိုသူလေးပုံသုံးပုံခန့်သည်သူတို့၏ရေချိုးခန်းတွင်မှန်များ (၂) ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုရှိသည်။
၆၊ ဖြေဆိုသူ ၅ ပုံ ၄ ပုံသည် ၄ ​​င်းတို့၏ပါဝင်မှုနှုန်းသည် ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး၊ ရေချိုးခန်းအ ၀ တ်အစား (၂၀ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့်ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းပညာရှင်များ (၁၂ ရာခိုင်နှုန်း) တို့ဖြင့်သူတို့၏ရေချိုးခန်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်အတွက်ပညာရှင်တစ် ဦး ကိုငှားရမ်းရမည်။
ရှေ့သို့ :: NASA မှရွေးချယ်လိုက်သောဤအိမ်သာသုံးလသည်လသို့သွားမည်! နောက်တစ်ခု: မီးဖိုချောင် Faucet ကိုဝယ်တဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲ
2021 / 04 / 22 3235
2021 / 04 / 21 4191